၂၀၁၄-ခု သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည့် ပုံစံအကြောင်း တစေ့တစောင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
၂၀၁၄-ခု သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည့်
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအတွက် မေးခွန်း ၄၁-ခု ရှိထားပါတယ်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် Consultant အဖြစ် International express အဖြစ် ဆွီဒင်မှ တစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူပေးထားပါတယ်။ National express အဖြစ် Department of Political က အငြိမ်းစားအရာရှိတစ်ဦး က ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်။ ၂၀၁၄-အတွက် မေးခွန်း တွေကိုတော့ ၇၃-ခု၊ ၈၃-ခု မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့သန်းခေါင်စာရင်းတွေ၊ ၉၃-ခုမှာတုန်းက သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ Draff တွေအပေါ် အခြေခံပြီး အာစီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ review တွေအပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီမယ့် မေးခွန်းတွေကို ပြင်ဆင်မှုပြု လုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဆိုရင်ရပ်ကွက်တစ်ခုချင်းအလိုက် ကောက်ယူမှာဖြစ်သည့်အတွက် ကောက်ယူသူတွေဟာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသည့်ရက်များအတွင်း မိမိတာဝန်ယူ ထားတဲ့ရပ်ကွက်မှာသာ နေရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီရက်တွေမှာလည်း ရပ်ကွက်အလိုက် သွားလာရေးကို ကန့်သတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား လုံခြုံရေးထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် NRS (Nothern Rakhine State) လိုမျိုးဆိုရင်တော့ လုံခြုံရေးထားရင် ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ သန်းခေါင်းစာရင်းကိုတော့ 2014 March 30 ကနေ April 10 အထိကို မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်တွေ အလိုက် ကောက်ယူမှာပါ။ အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်ကောက်ကြမှာပါ။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက် ယူမည့် သူများကိုလည်း Training ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ကောက်ယူမယ့်သူတွေဟာ အလယ်တန်းပြ ဆရာမတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့်သူများကို ပြန်လည်ကြီးကြပ် မှာက အထက် တန်းပြတွေပါ။ UNFPA က လ.၀.က ကို TOT (Training of Trainer) ပေးမှာပါ။ လ.၀.က ကမှ တဆင့် သန်းခေါင်စာရင်းကွင်းဆင်း ကောက်ယူမယ့်သူတွေကိုပြန်ပြီး သင်တန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းပေး မှာ က ရန်ကုန်(လ.၀.က ရုံးချုပ်)နဲ့ မန္တလေး (တက္ကသိုလ်ထဲ) မှာသင်တန်း ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
* * * 2014 Census အတွက် အဓိကပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရသည့် အဖွဲ့တစ်ခုမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် ၂၀၁၂-ခု ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ဆုံတွေ့ခိုက်ခဏမှာ 2014-ခု Population census နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ် လိုမျိုးတွေလုပ်ဆောင်နေလဲ၊ census ကိစ္စမှာ community အနေနဲ့ ဘယ်လိုပါဝင်လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted on January 10, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
RFA Burmese – “ပြည်ပအထွက် အဖမ်းခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာများ လဝက ဥပဒေနဲ့ အရေးယူခံရမည်” →